China acrylic camera fiberglass ngelaphu Ukwenziwa kunye Factory | Jiashun
I-acrylic camera camera ilaphu lefayibha inokuxhathisa kwemozulu ngokugqwesileyo, ubushushu obuphezulu kunye nemitha yelanga. Inokwakheka okuhle kwefilimu kunye nokusasazeka, kwaye ayinabungozi, ayinasiphelo kwaye inobuhlobo kwindalo. I-acrylic camera camera amalaphu efayibha evumela abasebenzisi ukusika, ukuthunga kunye nokufaka umngxunya ngokukuko.
Unyango lwe-weave-lock (i-Acrylic camera) luyomisa ilaphu kancinci ukunciphisa isixa sokubola ngexesha lokuzenzela. Ilaphu elilukiweyo eligqityiweyo lelaphu le-fiberglass lenza ukuba umsebenzisi asike, athunge kwaye abethe imingxunya ngokufanelekileyo.
Iingcango zomlilo / ikhethini yoMlilo
Ezinye iinkqubo zokulawula umlilo
1. Q: njani malunga nentlawulo isampuli?
A: Kutshanje isampulu: simahla, kodwa imithwalo iza kuqokelelwa isampuli eyenziwe ngokwezifiso: kufuneka isampulu yentlawulo, kodwa siya kubuyisa imali ukuba silungisa iiodolo ezisemthethweni kamva.
2. Q: Njani malunga nexesha lesampulu?
A: Kwiisampulu ezikhoyo, kuthatha iintsuku ezingama-1-2. Kuba iisampulu ngentando, kuthatha 7-10days.
3. Q: Lixesha elingakanani imveliso phambili?
A: Ithath 15-30 iintsuku MOQ.
4. Q: Yimalini intlawulelo-mthwalo?
A: Isisiseko sayo kwi-odolo yendlela kunye nokuthumela ngendlela! Indlela yokuhambisa ifike kuwe, kwaye sinokukunceda ukubonisa iindleko kwicala lethu kwireferensi yakho Kwaye ungakhetha eyona ndlela inexabiso eliphantsi yokuthumela!
Okulandelayo: PTFE Camera fiberglass amalaphu